ဤသည်ကားရေချိုးခန်းဖြစ်သည်၊ သင်၏အိမ်၌ရှိသောအိမ်သည်အိမ်သာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုအသစ်များ
ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / ဤသည်မှာရေချိုးခန်းဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်၌ရှိသောအိမ်မှာအိမ်သာတစ်ခုပဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုအသစ်များ
2021 / 04 / 05 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 1713 0
ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် selfie တည်နေရာသည်ရေချိုးခန်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လူတွေရေချိုးခန်းထဲမှာ selfies ကိုနှစ်သက်ရတာလဲ။
နံနက်ယံ၌အိပ်ရာမှထ။ အိမ်သာသို့သွားလို၊ ရေချိုးခန်းသို့ပြေးသွားသော်လည်းမိသားစုအတွင်း၌အဝတ်လျှော်နေသည်ကိုတွေ့ပါ။ သင်သည်ဤအခြေအနေမျိုးနှင့်ကြုံခဲ့ဖူးပါသလား။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စုပ်ကိုရေချိုးခန်းအပြင်ဘက် ထား၍ အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းအတွင်းသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရုံသာမကဘ ၀ ၏လိုအပ်ချက်များကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမကရေချိုးခန်းကိုပိုမိုအရည်အသွေးမြင့်စေသည်။
ဤဒီဇိုင်းသည်အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းတို့တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနှောင့်အယှက်မပေးရုံသာမကသွားတိုက်တံ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့်အခြားပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းများသည်ရေချိုးခန်းဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားမကျစေရန်သေချာစေသည်။
နေ့စဉ်ဘဝ၌ကြမ်းခင်းအိမ်သာများ၊ ကြမ်းပြင်ရေချိုးခန်းဗီရိုများမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှရေချိုးခန်းပုံစံ၏အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဂရုပြုရန်သာမကအရည်အသွေးကိုပိုမိုဂရုပြုလာရန်ဖြစ်သည်။ နံရံတွင်တပ်ထားသောအိမ်သာများ၊ နံရံတွင်တပ်ထားသောရေစုပ်စက်များ၊ နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်းဗီရိုများသည် ပို၍ အာရုံစူးစိုက်လာကြသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကြောင့်သာမကလူတို့၏ဘ ၀ လိုအပ်ချက်များအတွက်လည်းဤဒီဇိုင်းသည် ပို၍ သင့်တော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အိမ်သာ + အဝတ်လျှော်areaရိယာသိုလှောင်ရေးဒီဇိုင်း
တကယ်တော့နေသမျှကာလပတ်လုံးငါတို့ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သောအိမ်သာနောက်ကွယ်ရှိနံရံနှင့်သင့်တော်သောနေရာတွင်နံရံကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအသုံးပြုပါ။ 0.5㎡သာရှိလျှင်၎င်းကိုအလွယ်တကူဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
နံရံပေါ်ကတပ်ထားသောအိမ်သာ၏လျှို့ဝှက်ရေကန်သည်ရေချိုးခန်း ၀ န်ကြီးချုပ်အထက်တွင်ရှိသည်။
ဒီဇိုင်း “ အကြံပေးချက်များ"
အကယ်၍ ရေချိုးခန်းတွင်အဓိကမီးတစ်လုံးသာရှိပါက၎င်းသည်မညီမျှသောတောက်ပမှု၊ ဒေသတွင်းမှောင်မိုက်သောနေရာများဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ မူရင်းရေချိုးခန်းသေးသေးလေးသည်ပင်သေးငယ်သွားလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီကဏ္ three သုံးခုကိုသင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
အိမ်သာသုံးသည့်မှန်သေတ္တာအောက်ရှိ - အကယ်၍ သင်သည်အမှောင်ရင့်နေလျှင်၊ သင်ကအရန်မီးချောင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
အိမ်သာအထက်တွင် - အိမ်သာသုံးသည့်အခါသင်စာဖတ်တတ်သည့်အလေ့အကျင့်ရှိပါကအိမ်သာအထက်တွင် ထပ်မံ၍ သေးငယ်သောစာဖတ်ခြင်းအလင်းကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။
သတိပေးချက်: မီးခွက်များနှင့်မီးအိမ်တပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်းသည်အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ရန်ရွေးချယ်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကမီးခွက်များနှင့်မီးအိမ်များ၏အတွင်းပိုင်းသည်ရေအငွေ့များပေါ်လာမည်၊
ဗေဒကိုလန်းဆန်းဖို့အချိန်ရောက်ပြီ၊ ဖုံးကွယ်ရေချိုးခန်း လက်နက်၏တန်ဖိုးကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
လျှို့ဝှက်ဖုံးထားသောဤရေ၏ရေပေးဝေရေးပိုက်ကိုရေချိုးခန်းနံရံတွင်ကြိုတင်သင်္ဂြိုဟ်ပြီး၊ ခေါင်း၏အပေါ်ဘက်အနေအထားတွင်တပ်ဆင်ထားသည်၊ နံရံပေါ်သို့ကွင်းခတ်ထားခြင်းကိုမလိုအပ်ဘဲရုပ်သိမ်း။ မရပါ၊ အပြင်ဘက်တွင်ရေချိုးခန်းခေါင်းနှင့်ခလုတ်ကိုသာထိတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ရေချိုးခန်းခေါင်းတွင်ရေ၏ထောင့်ကိုထိန်းညှိရန်အသုံးပြုသောသေးငယ်သည့်ဘောလုံးတစ်လုံးရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှုအပေါ်နှင့်အောက်ထောင့်သည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။
ထိတွေ့မှုမရှိသော၊ အမြင်အာရုံသည်ပိုမိုရိုးရှင်း။ လှပသောကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာမရှိပါ။ သေးငယ်တဲ့ရေချိုးခန်း၏ospelဝံဂေလိတရားကို။
ရှေ့သို့ :: ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်အရောင်, ရေချိုးခန်းအာကာသအမှန်တကယ် Hip! နောက်တစ်ခု: ရေဆေးခြင်းဆေးအပြင်ဘက်တွင်အမှန်လက်တွေ့ကျသည်! သို့သော် အကယ်၍ သင်ဤအချက် ၅ ချက်ကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါက၊
2021 / 04 / 12 61